Inaliti zomngundo, inaliti Ukubumbela, zeplastiki Ikubumbe Maker China
• Umngundo inkqubela umbuzo-ERP
-Shot Two Ikubumbe
Ukwazisa ukuba HKY
Kungani ukhethe HKY
Yasekwa ngonyaka ka-2005, HKY Ikubumbe yenye abenzi Inaliti sokubumbela kakhulu ukukhuphisana neenkampani isitofu yokubumba e Shenzhen, China. Sikhonza uluhlu olubanzi lwamashishini kuquka ngaphakathi izithuthi, iinkqubo zokupholisa ngomatshini, elektroniki, izicelo ekhaya, zonyango, amandla, mveliso kunye nangaphezulu.
Nika Inaliti nokuvunda kwaye Inaliti iinkonzo udini
HKY Ikubumbe, inkampani Inaliti sokubumbela Chian, ikunikeza simse ngokwesiko iindawo Inaliti wabumba ngumngundo
Professional China isiko Inaliti nokuvunda kwaye isithsaba iinkampani IATF-16949 ukuqiniszekiswa kunye nolawulo ERP neenkqubo
We nje ukuvelisa ngumngundo nokubunjwa iinxalenye wena, kodwa unako ukunika uyilo iindawo, nesingxobo, ukupeyinta, ushicilelo screen kunye nezinye iinkonzo ezinxulumene mveliso.
Sizimisele ukuqinisekisa umgangatho nolwaneliseko nabathengi bethu nokuqinisekisa ukwaneliseka.
ngaba uyazi isicombululo
ingqamana neesd lakho ishishini
UQHAGAMSHELWANO WETHU PROJECT Elite
Khetha weNkonzo enze
Xa iiprojekthi ezininzi, ukongeza iindawo zeplastiki, kukho iinxalenye ingxubevange, ezifana intsila yethu efanayo aluminiyamu, zinc ingxubevange, titanium ingxubevange, la malungu ingxubevange nabo kufuneka ukubunjwa. Ukuze ukunika abathengi kunye ngenkonzo ebhetele, siye sasungula iqela die die-umtyhido yobungcali ngo-2015 amava atyebileyo ngoku, siye wayiqokelela ukuhlangabezana neemfuno abathengi abaninzi.
Siye phambili koomatshini udini inaliti zeplastiki kunye neminyaka namava kwiqela kushishino isitofu ambumbe, kunye amagcisa 2 QC shift nganye. Sikwathumela nebhetshi yokuqala leesampuli ukuya ngumthengi ukuze zihlolwe. QC kuvavanya i iisampulu ngokusebenzisa CMM, umatshini, 2DMI, altimeter, ibhloko gauge, inaliti gauge, L-isikwere, imbi, micrometer, ngokuba lukhuni kunye nezinye izixhobo zovavanyo. Thumela iingxelo ezisemgangathweni kubaxumi ukuze zihlolwe, ezifana Fai, SPC, CPK, njl Wonke umsebenzi senza kuphela umgangatho ophezulu siko Chinese ziphene sukube.
HKY zomngundo has olutheni ngumngundo inaliti umbala kabini kunye neenkqubo ejikelezayo, nto leyo evumela ukhetho oluchanekileyo kweentlobo kwemveliso kunye neendawo esangweni, ukwenza sokudityaniswa imibala ezimbini lula kwaye zichaneke kakhulu. Ukongeza, ngokweemfuno zabathengi, singakwazi kwakhona ukunika inkonzo yerabha yokubumba eziziisekondari.
A yenzelwe kakuhle kwaye ngqo eyenziweyo sikuyo isitshixo imveliso ngokufanelekileyo iinxalenye zeplastikhi elungileyo. Iqela HKY uye amava atyebileyo kwi Precision ngumngundo ukuyila, lemveliso evela yonke le minyaka yokufunda, ezivumela ukuba sikhonze abaxumi bethu ekwakheni ababu- iinxalenye ukuba isakhiwo nzima kunye neemfuno ineenkalo tight.
Buka iinkonzo zethu
KUTHENI KHETHA HKY Ikubumbe
√ Nge kuthi, uyakwazi ukugcina ixesha nemali. Thina mveliso, ukuba asebenze nathi banokuwuphepha ikhomishini umrhwebi
√ Iqela lethu zobunjineli Unamava amakhulu amashishini kunye nezakhono zolawulo lweprojekthi, ngokunjalo IsiNgesi ngempumelelo unxibelelwano oluhle zobugcisa.
√ ukuhlangabezana ngokupheleleyo imilinganiselo yakho umgangatho, onke amacandelo ulisebenzisa ezibolile ngaphandle zakhiwa ngokuhambelana DME, imigangatho HASCO, ezifana nezikhonkwane sikhokelo, bushings, thimbles okanye ngokweemfuno zabathengi.
√ Sayina uxwebhu isivumelwano non-disclosure (Agreement Non-Disclosure) ukukhusela ulwazi lwakho projekthi kwaye Asisoze sabelane data zakho naliphi na elinye iqela lesithathu.
√ DFM (yoyilo manufacturability) uhlalutyo yelungu ngalinye kunye nokuchongwa imiba yingozi (uyilo inxalenye kunye neengxaki babumbe) phambi asibumbe design and lokuvelisa
√ Ngokutsho imizobo-2D umthengi, zonke sikuyo zihamba isiqinisekiso sentsimbi, iziqinisekiso unyango ubushushu, parameters zovavanyo nokuvunda kwaye ingxelo womlinganiselo ngokupheleleyo.
√ Thina kwama-20 iminyaka amava kwi kuyilo sokubumbela, ukwenziwa sokubumbela Inaliti, umbala-Two ukungunda, Die siwisa, Inaliti udini Ulwenziwo lokuthile
√ Soloko ingxelo kubaxumi bethu ngendlela ngexesha nokunxibelelana ngokukhawuleza abathengisi bendawo
√ iye ibiba abathengi abaninzi kule projekthi Inaliti ukungunda, leyo ndibala kumashishini ezahlukeneyo ezifana Automotive, Aerospace, Imitshini, Isixhobo, Electronics, Packaging, oomatshini, njl
Idilesi Room # 102, Building # 50, Shu Tianpu Xin xing Industry Zone B, Matian Street, rachel Ming District, zhen mzi, Dong kwiPhondo rachel, China, 518101
Nceda ushiye iinkcukacha zakho ukuba kukho na Custom Inaliti Ikubumbe, Inaliti ukulolonga iiprojekthi Ukwenza kufuneka ukuba acatshulwe, ummeli wethu uya kuqhagamshelana nawe ngexesha.
Custom Precision Plastic • Umngundo, Handle Shell Plastic Injection Molding, Plastic zomngundo Inaliti, Plastic Injection Moulding Components,